Maxay ka dhigan tahay doorashada kursiga HOP039? | KEYDMEDIA ENGLISH
Maxay ka dhigan tahay doorashada kursiga HOP039?
Kursiga uu soo dhacay Fahad Yaasiin HOP086 iyo kursiga laga dilay Xildhibaan Aamino, HOP135, ayaa baaqi ku sii ahaan doona Baladweyne, halka Guudlaawe u soo safri doono Jowhar.
BALADWEYNE, Soomaaliya – Guddiga doorashada heer Dowlad goboleed ee Hirshabeelle ayaa shaaca ka qaaday liiska odayaasha iyo bulshada rayidka ee soo xulaya ergada dooraneysa kursiga tirsigiisu yahay HOP#039.
Sida ku cad war qoraal ah, oo ka soo baxay Guddiga doorashada Hirshabelle, maanta 04/04/2022, ayaa la diiwaan galinayaa ergada iyo Murashixiinta, ka hor inta aan galabta ama caawa loo dareerin doorashada kursiga.
HOP#039, waxaa Baarlamaankii 10-aad ku fadhisay Drs. Maryan Axmed Haruun, waxaana kursigaan ku suntan beesha Dirisame ee Gaaljecel, degaan doorashadiisuna waaa magaalada Baladweyne ee xarunta Gobolka Hiiraan.
Doorashada kursigaan ayaa ka dhigan in Baladweyne ay baaqi ku ahaan doonaan kaliya labo kursi, oo kala HOP135, oo ay ku fadhisay AUN, Xildhibaan Aamino Maxamed Cabdi iyo HOP086, oo Faarax Cabdulqaadir ku fadhiyay.
HOP086, waxaa Baladwene, ku soo boobay eedeysane Fahad Yaasiin, waxaana ansixinta natiijadiisa diiday Guddiga Doorashooyinka heer Federaal, taas oo ka dhigan in kursigaan HOP135 iyo HOP086 Baladweyne sii oolli doonaan.
Sida ay Keydmedia Online, u sheegeen, howl-wadeenno ka tirsan xaafiiska Madaxweynaha Hirshabeelle, Guudlaawe, ayaa ka soo baqooli doona Baladweyne, wixii maanta ka danbeeya, si uu u qabto doorashada li kursi oo ku dhiman Jowhar.
Hirshabeelle, waxaa taalla 38 kursi oo Golaha Shacabka ah, 29 ka mid ah ayaa ilaa hadda la doortay, sagaal ayaa baaqi ah, lix ka mid ah waxa ay yaallaan Jowhar, halka saddexda kale ku dhiman yihiin Baladweyne, HOP#039 ayaana maanta lagu dooran doonaa.
247 kursi oo 50 ka mid ah dumar yihiin, ayaa ilaa hadda laga doortay 275-ka kursi ee Golaha Shacabka, taas oo la micno ah in 89.8%, la dhameystiray kuraasta Golahaas, halka, ku dhawad 120 xildhibaan qaateen aqoonsiga Baarlamaanka 11-aad.